Mofomamy mofomamy miaraka amin'ny compote sy paoma | Bezzia
Mofomamy mofomamy miaraka amin'ny compote sy paoma
Na inona ilay pie poma mitovy amin'ny paoma betsaka kokoa. Manantena aho fa tianao ilay paoma tarts satria kely fotsiny no manana an'io mofomamy mofomamy puff miaraka amin'ny compote sy paoma. Mofomamy tonga lafatra ho toy ny tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny sotro gilasy vanilla iray. Toa tsara ve? Ela ny fotoana hanaovana azy, saingy mampanantena izahay fa mendrika izany!
Raha te-hanangona an'ity mofomamy ity sy hitondra azy any amin'ny lafaoro dia mila miomana aloha isika mofomamy puff sy paoma izany dia mpameno. Azonao atao ny manomana azy ireo mialoha ary miaro azy ireo mandritra ny alina ao anaty vata fampangatsiahana. Io no fomba tsara indrindra hihetsika raha mieritreritra ianao fa tsy manam-potoana hanaovana ny zavatra rehetra amin'ny maraina na mety handresy anao ny fanaovana izany.
Miasa ilay mofomamy fa tsy sarotra mihintsy. Na iza na iza dia afaka manao izany raha mbola manana ora mangina vitsivitsy handany ao an-dakozia izy ireo. Mendrika ny valiny; ny fotony miaraka amin'ny sisin'ny siramamy dia mangatsiaka ary ny famenoana compote dia manome azy, ankoatry ny hamaminy, endrika silky izay mifanohitra amin'ny an'ny paoma.
1 Akora ho an'ny 6
Akora ho an'ny 6
Ho an'ny compote
500 g. paoma, voahitsakitsaka ary voatetika
60 g. dibera
40 g. siramamy volontany
Rano 1/2 vera
Ho an'ny lamesa
200 g. Ny lafarinina
120 g. dibera mangatsiaka, diced
Rano ranomandry 4 sotro fihinanana
Ho an'ny famaranana
Dibera 1 knov, miempo
Paoma voapaika 4
Atombohy amin'ny fanomanana ny paoma. Mba hanaovana izany, andraho amin'ny rano ny dibera sy dibera ary siramamy amin'ny hafanana antonony. Rehefa levona ny dibera dia ampio ny paoma, sarony ny kaserôra ary andrahoina amin'ny hafanana antonony mandra-pitolon'ny paoma.
Vantany vao malemy izy ireo, dia arotsaho amin'ny tsorakazo na mixrup ary mahandro, tsy misy sarony intsony izao, mandra-pahatongan'ny etona ary compote matevina be no mijanona. Ity ampahany ity dia lakile mba "masiaka" ny mofomamy ka aza manandrana mihazakazaka. Avelao izy hangatsiaka ary hitehirizana anaty fitoeran-drivotra ao anaty vata fampangatsiahana raha tsy hampiasanao izany raha tsy ny ampitso.
PMba hanaovana ny mofomamy puff Afangaroy ao anaty lovia ny fangaro rehetra, apetaho amin'ny rantsan-tànanao ny koba amin'ny voalohany. Ny fangaro aorian'ny pinches voalohany dia hitovy amin'ireo potipotika sasany izay azonao angonina amin'ny farany amin'ny baolina koba. Aza mandoto bebe kokoa, ampy fotsiny mba hiarahan'ny zava-drehetra. Afatory ao anaty fonosana plastika avy eo ary atsofohy mandritra ny antsasak'adiny ny vata fampangatsiahana.
Aorian'ny antsasak'adiny, ahodino amin'ny lafarina lafarina ny koba miaraka amin'ny roller mba hamorona mahitsizoro. Avy eo atsangano ny sisiny lavitra indrindra aminao ary ento eo afovoan'ny efamira. Avy eo, atsangano ny sisiny akaiky anao ary apetraho eo amboniny toy ny hoe manao fonosana kely ianao.
Kitiho ny tampony amin'ny fantsom-pamokarana mba hametahana kely azy io ary ahodinanao 90 degre ny koba. Eo imasonao izao dia tokony ho hitanao ireo sosona koba telo vokatry ny aforitra teo aloha. Ahinjiro indray ary avereno ny fandidiana. Avy eo fonosina anaty fonosana plastika dia atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny iray na mandra-pahatongan'ny fotoana hampiasana azy. Mety haharitra iray andro izany.
Amin'ny zavatra voaomana rehetra, arotsaho amin'ny 180ºC ny lafaoro.
Alao ny koba ao anaty vata fampangatsiahana dia ahodino amin'ny taratasy fanaova. Atsofohy amin'ny tsorakazo ny tapany afovoany, manaja ny sisiny, manodidina ny 2 santimetatra eo amin'ny lafiny tsirairay.
Alefaso amin'ny atody ireo sisiny ireo ary avy eo hafafiny siramamy amin'izy ireo. Ny siramamy hiraikitra amin'ny dibera.
Avy eo apetraka amin'ny tapany afovoany a Ny sosona compote malala-tanana ary eo amboniny ny silaka paoma. Avy eo, miaraka amin'ny borosy, mandoko ny paoma amin'ny dibera miempo.
Hamita ento amin'ny lafaoro ny mofomamy hafanaina sy hidina 45 minitra na mandra-pahatongan'ny volontsôkôlà volamena ary mety malemy ny paoma.
Mialà amin'ny lafaoro ary avelao hirehitra kely izy alohan'ny hankafizanao ity tartera mofomamy puff ity miaraka amin'ny compote sy paoma.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Postres » Mofomamy mofomamy miaraka amin'ny compote sy paoma
Ny fananana mpiara-miasa be fanantenana dia tsara amin'ny fahasalamanao